OTU ESI EME KA HDMI NA LAPTỌỌPỤ - HDMI - 2019
Netwọk mmekọrịta netwọk VKontakte na-enye ndị ọrụ ohere igosipụta echiche ha na mmetụta ha site na iji ngọngọ ederede pụrụ iche. "Ọnọdụ". N'agbanyeghi ngbanwe edere nsogbu nke ubi a, ụfọdụ ndị ọrụ amaghị otú e si etinye na ọkwa ọ bụghị naanị ederede, kamakwa emoticons.
Anyị na-etinye ndị na-acha uhie uhie n'ọnọdụ
Nke mbụ, a ghaghị ịghọta na na akụ a ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ederede ederede ọ bụla nwere eserese ngosi, site na nke ị nwere ike iji emoticons na-amaghị ama koodu pụrụ iche nke onye ọ bụla emoji. N'otu oge ahụ, ọ bụrụ na ọ bara uru ka ị jiri Klas, gọọmentị na-enyekwa ohere a, usoro ahụ na-agbanwekwa ederede na ihe ndị na-ese onyinyo.
Ndị emoticons na-agbaso ụkpụrụ njirimara mara mma. N'okwu a, n'ihe banyere Emoji, otu ọchị ọchị dị ka otu onye mara, ma ọ bụ akwụkwọ ozi ma ọ bụ ihe ịrịba ama ọ bụla.
Site nchịkọta nhọrọ nke saịtị VKontakte gaa mpaghara "My Page".
Na top top pịa ubi. "Gbanwee Ọnọdụ"dị n'okpuru aha gị.
N'akụkụ aka nri nke oghere mepere emepe, kpoo òké ahụ n'elu akara ngosi ahụ nke nwere onyinyo nke ọchị ọchị.
Họrọ ụdị emoji ịchọrọ ma pịa ya.
Ọ bụrụ na ịnwe mkpa ịwụnye ọtụtụ emoticons n'otu oge, megharịa usoro a kọwara.
Pịa bọtịnụ ahụ "Chekwa"ịtọ ọkwa ọhụrụ nke nwere emoticons.
Usoro nke iji Emoji na ọkwa nwere ike mechaa. Ihe kacha mma!
https://termotools.com ig.termotools.com © HDMI 2019